Vimba izinkamapani ekufihleni izigidi ezingasetshenziselwa i-#FeesMustFall - Amandla.mobi isiZulu
Vimba izinkamapani ekufihleni izigidi ezingasetshenziselwa i-#FeesMustFall
Ngemuva kokukhishwa kwePanama Papers, kudalulwe izindlela ezisetshenziswa abacebile kanye nezinkampani ekufihleni imali eyizigidi yenkohlakalo phesheya nokuyisu lokugwema ukukhokha intela. Lokhu kulimaza iNingizimu Afrika ngoba kuholela ukuthi kube nemali encane ngasetshenziselwa imfundo, ezempilo, kanye nezidingo-ngqangi. Okwamanje, kulabo abathintekayo ekufihleni imali phesheya kubalwa u-J Arthur Brown weFidentia , Gary Porritt  kanye noKhulubuse Zuma .
Ngo 2012 kuphela, izinkampani eNingizimu Afrika zafihla imali engango $29 wamabhiliyoni ngenhloso yokugwema ukukhokha intela kwaSARS. Leyo mali ilinganiselwa kwimali engalungisa umuzi waseNkandla izihlandla eziphindaphindwe ka-1300 , . Lama bhiliyoni wamaRandi angakwazi ukuthi aqikelele ukuthi abafundi bafinyelela emfundweni ephakeme nesezingeni eliphezulu.
Izinkampani ziwafihla kanjani amabhiliyoni emali phesheya ngokuhlosa ukungakhokhi intela kwaSARS? Izinkampani zisebenzisa inqwaba yabameli kanye nabagcinimabhuku ukuthi bathole amaphutha noma izikhala emithethweni nasemigomweni yethu yentela ukuze zikhokhe intela encane. Isibonelo, izinkampani ziye zibhalise amahhovisi ezindaweni ezifana noBermuda, bese zibizembumbulu izindleko ezishisayo kwihhovisi eliseNingizimu Afrika . Lokhu kungelinye lamasu asetshenziswa ekugudluleni inzuzo ekhandwe eNingizimu Afrika. Kuthi uma sekuza isikhathi sokukhokha intela kwaSARS, lezi zinkampani zibike inzuzo encane, okuholela emalini encane yezidingo-ngqangi. Lokhu akusibo ubulungiswa kithina esikhokha intela ngokwehlelo lweVAT njalo umasithenga impuphu noma i-airtime noma ngemiholo yethu. Zikhona izinkampani ezikhetha ukungayikhokhi intela, kuthi ekwenzeni njalo, zidla ngezimpilo kanye nekusasa lethu sengathi bathi “Tax me if you can”. Yingakho kufanele ukuthi sisonke sibambisane kanye nabakwa-Oxfam kanye ne-Economic Justice Network ekufuneni ukuthi uNgqongqoshe wezimali athathe isinyathelo.
Ngqongqoshe weziMali Pravin Gordhan,
Sifuna ukuthi wenze njengamanje ukuthi izinkampani ezinkulu kanye nabacebile bayeke ukufihla inzuzo phesheya. Siyayiseka imizamo yokubekwa kokubikwa okuphoqelelile kwezinkampani kumazwe ngamazwe. Lokhu kuzophoqa izinkampani ukuthi zibike inzuzo kanye namaholo eziwenza kwamanye amazwe.
Ohulumeni kufanele bakwazi ukushintshelana nemininingwane ethinta izimali kalula futhi baphinde bakhuthaze ukusebenzisana phakathi kwabalawuli bentela. Akufanele kube nezaba zokungakhokhi intela. UNgqongqoshe obesesikhundleni sakho uNhlanhla Nene wasizwa kulokhu, waphinda wahambela i-summit ye-UN Financing for Development e-Addis Ababa eyoseka imizamo yokubekwa kokubikwa okuphoqelekile kwezinkampani kumazwe ngamazwe. Sifuna ukuthi uqedele lokhu akuqalayo kokuthi kubekhona amabhuku lapho kuzobhalwa abahlomulayo ezinkampanini ngobunini bazo. Umphakathi kanye nabomthetho kufanele bakwazi ukufinyelela kuwo lamabhuku ukuze kubenzima ukufihla imali yenkohlakalo, eyobugebengu kanye neyokugwema ukukhokha intela. Njengsinyathelo sokuqala, sinxusa ukuthi izinkampani ezibhidela imisebenzi esemkhakheni womphakathi zidalule abahlomulayo ngobunini bazo.
Sifuna futhi ukuthi uqinikelele ukuthi iNingizimu Afrika iyahambisana kanye namazinga abekelwe abasebenza kwezomtheto kanye kokugcina amabhuku ezimali, kwezokuhweba ngomhlaba, yilabo ababhalisa izinkampani kanye nalabo abasebenza emabhange ukuze kufakwe imigomo elwa nokusetshenziswa kwemali ngokungemthetho. Sifuna futhi ukuthi kuqokwe izinhlelo ezizokwengamela ziphinde zinike noma zincishe igunya kulemikhakha. Izinhlangano zabasebenzi kufanele zibaphuce izincwadi ezigunyazayo labo abatholwa benamacala.
UNgqongqoshe weziMali uPravin Gordhan ungaphansi kwengcindezi ngemuva kokuthi i-Panama Papers iveze izikhala zokugwema ukukhokha intela ezisetshenziswa izinkampani kanye nabacebile ekufihleni izigidi phesheya. Lokhu kubiza ukuthi athathe izinyathelo eziphuthumayo phambi kokuthi kulahleke enye imali engasetshenziswa ekuletheni izidingo-ngqangi.